I-Oil Rushed Bronze Bathroom Sink Faucet 2-Handle 4 Inch Centerset
Ikhaya / Amanzi okugeza / Oompompi Bokugeza BaseCenterset / WOWOW Amafutha Ahlikihliwe Bronze Indlu yangasese Sink Faucet 2-Handle 4 Inch Centerset
I-WOWOW faucet 100% Ukucindezelwa KOKUVIVINYWA - konke ompompi kuhlaziywa ngaphansi kwengcindezi ephezulu yamanzi ukuqinisekisa ikhwalithi ephezulu nokukhuthazela. 4 intshi ompompi basendlini yokugezela abasabalala, ikhwalithi ephezulu yokwakha ithusi uNdunankulu ekupheleni eyenzelwe ukusebenza kwe-Life ukwakheka kwesimanje.
2321200RB imiyalo yokufaka
Amafutha ompompi wokugezela wethusi we-bronze 2321200RB imininingwane:
Uma ucabanga ngemikhiqizo yethu yakamuva, sicela ungangabazi ukuxhumana nathi ngentengo yezindleko.
CENTERSET: Isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu classique ngenduku ikheshi bese vela isivalo. Igumbi lokugezela kompompi elinamabhande amabili nje okugeza izibambo: isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu sibheke ngqo ekulungiseni amanzi kanye nolawulo lokushisa kwamanzi.
INHLANZI YOKUSETSHENZISWA NGOMHLANGANO WEDRINA IHLANGANISIWE: Uwoyela ompompoza ithusi lendlu yokugezela ufaka phakathi umsele wensimbi, amanzi avela esiqwini sompompi ngokucindezela induku yekheshi, ukuvimbela ukumaka izandla zakho ezigeziwe.
SINK FAUCET OIL RUBBED BRONZE: isibambo sesibambo sokuklama isitayela se-retro yakudala. Yilwa nokugqwala. Ideski elibekwe ompompi bamampunge elifanele indlu yokuqasha, i-condo entsha, ifulethi elilodwa, ikhaya lezimoto, i-trailer yokuhamba nokusetshenziswa kwasekhaya. Sicela uxhumane nathi uma kukhona imibuzo.
SKU: 2321200RB Categories: Oompompi Bokugeza BaseCenterset, Amanzi okugeza Tags: isikhungo se-labset, igumbi lokugezela le-intshi, Amafutha Okugcotshwa Amafutha